दैनिक राशिफल: ० APRIL अप्रिल २०२१ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ज्योतिष
दैनिक राशिफल: ० April अप्रिल २०२१
खेलकुद आरबीसी विरासत भन्दा अगाडि अनिर्बान लाहिरी विश्वस्त छन्
टेक्नोलोजी रिलायन्स जियो, एयरटेल, भि, र बीएसएनएल बाट सबै प्रविष्टि डाटा डाटा वाउचरहरूको सूची
समाचार कुम्भ मेला फर्कनेहरूले COVID-१ p महामारी बढाउन सक्दछ: संजय राउत
चलचित्रहरू COVID-१ To को कारणले अदालतबाट विरा Sathidar Aka नारायण कांबलेको मृत्यु भयो
घर ज्योतिष राशिफल राशिफल oi-दीपनिता दास द्वारा दीपनिता दास अप्रिल 8, 2021 मा
आज केही राशिफलका लागि र अन्यका लागि तनावपूर्ण हुनेछ, त्यहाँ सफलता पनि हुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो जीवन र अगाडि के हुन्छ भन्नेबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो दैनिक राशिफल पढ्नुहोस्। यहाँ तपाइँ सबै जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसोभए आउनुहोस् हामीहरू तारामा तपाईंको लागि स्टोरमा छन्।
मेष: २१ मार्च - १ April अप्रिल
यदि तपाइँ काम गर्नुहुन्छ भने आज तपाइँको लागि धेरै शुभ दिन हुनेछ। तपाइँ अफिसमा चाहानु भएको कुनै पनि काम पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको आत्मविश्वास बढ्नेछ र तपाईं सम्पूर्ण सकारात्मकताका साथ आफ्नो सबै कामहरू पूरा गर्न प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाईंले वरिष्ठ अधिकारीहरूको समर्थन पनि पाउनुहुनेछ। आजका दिन साना व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन होइन। तपाईंको हात निराश महसुस गर्दछ। परिवारको अवस्था सामान्य भन्दा राम्रो हुनेछ। तपाईं आज घरका सदस्यहरूसँग महत्त्वपूर्ण छलफल हुन सक्नुहुन्छ। दिनहरू पैसाको हिसाबले महँगो हुने आशा गरिन्छ। तपाईंले पुरानो बिल तिर्नु पर्ने हुन सक्छ। तपाईं राम्रो स्वास्थ्य मा हुनेछ।
भाग्यशाली रंग: सुन्तला
भाग्यशाली संख्या: १।
झारपातका साइड इफेक्टहरू के के हुन्
भाग्यशाली समय: :30::30० देखि साँझ :00:०० सम्म
वृषभ: २० अप्रिल - २० मे
यदि तपाईंसँग आज गर्नुपर्ने अझ धेरै कुरा छैन भने परिवारका सदस्यहरूसँग समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्, विशेष गरी घरका युवा सदस्यहरूसितको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाइँ एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ र प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए आजको दिन तपाइँको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने छ। तपाईंको शिक्षामा कुनै पनि अवरोध हटाउन सकिन्छ। तपाईंको गुरुको सल्लाहलाई पनि वेवास्ता नगर्नुहोस्। पैसा राम्रो अवस्थामा हुनेछ। यदि तपाईं आफैंमा किनमेल गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने दिनको लागि यो उपयुक्त छ। आज तपाईंलाई सडकमा हिंड्दा बढी सावधान रहन सल्लाह दिइन्छ, अन्यथा तपाईंको दुर्घटना हुन सक्छ।
भाग्यशाली रंग: गाढा रातो
भाग्यशाली संख्या: २।
भाग्यशाली समय: १०:०० बिहान :30::30०
मिथुन: २१ मे - २० जुन
यदि तपाईं केहि दिनको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंको यो समस्या आज अन्त्य हुनेछ। मानसिक रूपमा तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ। तपाईं पनि परिवार संग राम्रो समय बिताउन को लागी एक मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज आर्थिक मोर्चामा तपाईंको लागि मिश्रित परिणाम हुनेछ। तपाईंको आय राम्रो हुनेछ, तर त्यहाँ अनावश्यक खर्च हुन सक्छ। तपाईको बजेट अनुसार खर्च गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। यदि तपाईं एक ठूलो व्यवसाय हो भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्ना कर्मचारीहरूसँगको विवादबाट जोगिनु आवश्यक छ, अन्यथा ठूलो नोक्सान हुन सक्छ। काम खोज्नेहरूलाई पनि उनीहरूको अफिसमा वरपरका गतिविधिहरूमा नजर राख्ने सल्लाह दिइन्छ अन्यथा कसैले तपाईंको कडा परिश्रमको लागि क्रेडिट लिन सक्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले दिन सामान्य हुनेछ।
न्यानो पानी पक्ष प्रभावको साथ मह
भाग्यशाली रंग: खैरो
भाग्यशाली संख्या: २२
भाग्यशाली समय: बिहान :30::30० देखि :40::40० अपराह्न
क्यान्सर: २१ जुन - २२ जुलाई
यदि तपाईं व्यापार गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आज धेरै समस्याहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक अवरोधका कारण। तपाईंको केहि महत्त्वपूर्ण काम बीचमा अड्किने सम्भावना छ। यद्यपि तपाईले त्यस्ता चुनौतिहरूको समयमा पनि आतंकको आवश्यकता पर्दैन। तपाईंले धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्छ, चाँडै नै चीजहरू तपाईंको पक्षमा ट्रेंडिंग देखिने छन्। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं रोजगारदाता हुनुहुन्छ र अफिसमा उच्च अधिकारीहरूले तपाईंको काममा रहेका कमजोरीहरूलाई हटाउँछन् भने तपाईंले अहंकारको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईंको गल्तीहरू स्वीकार गरेर उत्तम दिनुहोस् भन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कुरा गर्दै, यदि तपाईको आमाको स्वास्थ्य केहि समयको लागि राम्रो छैन भने, यसलाई लापरवाही नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
भाग्यशाली रंग: पहेंलो
भाग्यशाली समय: १२::30० देखि साँझ :15:१:15 अपराह्न
सिंह: २ July जुलाई - २२ अगस्त
यदि तपाईं व्यापार गर्नुहुन्छ र आज नयाँ सम्झौता गर्न लाग्नुभएको छ भने, त्यसोभए तपाईंलाई आफ्नो निर्णय होसियारीसाथ लिन सल्लाह दिइन्छ। अरूले भनेको जस्तै तपाईंको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरू नगर्नुहोस्। कर्मचारीहरूको सामान्य दिन हुनेछ। आज अफिसमा तपाईंको कामको बोझ कम हुनेछ। तपाईंको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक हुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो बजेट अनुसार खर्च गर्नुहुन्छ भने, त्यसो भए आज कुनै समस्या हुने छैन। तपाईको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा कुरा गर्दै, बच्चाहरूसँग बढी कडासँग व्यवहार नगर्नुहोस्। तपाईंले तिनीहरूलाई प्रेमको साथ बुझाउनु पर्छ। जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। तपाईं आफ्नो प्रियको भावनात्मक समर्थन प्राप्त गर्नुहुनेछ। जहाँसम्म तपाईंको स्वास्थ्यको सवाल हो, आँखासँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ। तपाईले डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ।
भाग्यशाली रंग: गाढा पहेंलो
भाग्यशाली समय: साँझ 5:१:15 र अपराह्न :20: २० सम्म
कन्या: २ August अगस्ट - २२ सेप्टेम्बर
यस राशिका गर्भवती महिलाहरूलाई आज बढी सजग रहन सल्लाह दिइन्छ। थोरै लापरवाही हानिकारक हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो घरको वातावरणलाई आनन्दित राख्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो परिवारलाई पर्याप्त समय दिनुपर्दछ, विशेष गरी आज आमाबाबुसँग बढी समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। आज तपाईंको कामको मोर्चामा राम्रो परिणामहरूको दिन हुनेछ। यो काम वा व्यवसाय होस्, तपाइँका सबै कामहरू कुनै बाधा बिना पूरा हुनेछन्। यदि व्यापारीहरूले आफ्नो शेयर बढाउनको लागि सोच्दै छन् भने आजको लागि यो राम्रो दिन हो। तपाईंको वित्तीय अवस्था सामान्य हुनेछ। यदि तपाईंले बचतमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने, तपाईं चाँडै नै आफ्ना सबै वित्तीय समस्याहरूबाट मुक्त हुनुहुनेछ।
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
भाग्यशाली समय: साँझ 5:०० देखि १०:१:15 अपराह्न
तुला: २ September सेप्टेम्बर - २२ अक्टुबर
यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ र उच्च शिक्षाको लागि कुनै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए आजको दिन तपाईंको लागि एकदमै शुभ दिन हुनेछ। तपाईले ठूलो अवसर पाउनुहुनेछ। तपाईंको कामको बारेमा कुरा गर्दै, यदि कार्यालयमा हाकिमले तपाईंलाई कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पे भने, त्यसो भए तपाईले यसलाई कडा मेहनतका साथ पूरा गर्ने प्रयास गर्नुभयो। तपाईका लागि अगाडि बढ्नका लागि यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ। आजका दिन व्यापारीहरूका लागि लाभदायक दिन हुनेछ। तपाईं ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पारिवारिक जीवनमा सर्तहरू उतार-चढावको पूर्ण हुन्छ। घरका कोही सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा कटुता हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा तपाईंको घरको वातावरण बिग्रन सक्छ, साथ साथै यसले तपाईंको बच्चाहरूमा नराम्रो प्रभाव पार्छ। तपाईंको स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दै, आज तपाईं एकदम थकित र बोझिल महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
विवाहित जोडीहरु को लागी सुत्न सबै भन्दा राम्रो दिशा
भाग्यशाली संख्या: .१
भाग्यशाली समय: १०::30० बिहान :00:०० बजे
वृश्चिक: २ October अक्टोबर - २१ नोभेम्बर
अफिसमा तपाईंलाई काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सल्लाह दिइन्छ। यहाँ र त्यहाँ सहकर्मीहरूसँग बढी कुरा गर्नबाट जोगिनुहोस्, विशेष गरी तपाईं र तपाईं आफ्नो गोप्य जानकारी साझा गर्नबाट जोगिनुहुनेछ। फर्नीचरसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्दछन्। तपाईंको व्यवसाय बढ्नेछ। तपाईंको जीवनसाथीसँग झगडाको सम्भावना छ। तपाईंको प्रेमीको प्रकृतिमा भयंकरता आउनेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई आफैंलाई नियन्त्रण गर्न सल्लाह दिइन्छ। चिसो हेडको साथ काम गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईंको आर्थिक स्थिति बलियो हुनेछ। आज तपाईं आफ्नो नजिककोबाट पनि आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्दै, तपाईलाई आज आफ्नो छालासँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ। सफाईको ख्याल राख्नुहोस् र छालाको उत्पादन सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्।
वजन घटाने को लागि आंवले को रस को लाभ
भाग्यशाली रंग: गाढा निलो
भाग्यशाली संख्या: १०
भाग्यशाली समय: साँझ :30::30० देखि :0: ०9सम्म
धनु: २२ नोभेम्बर - २१ डिसेम्बर
आजको दिन तपाईंको कामको मोर्चामा तपाईंको लागि एकदम व्यस्त दिन हुनेछ। तपाईंले कडा परिश्रम गर्नुपर्ला वा तपाईंले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ब्यापारसँग जोडिएको व्यक्तिले लामो यात्रा गर्न सक्दछ। थकान र तनावले तपाईंको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ। यो राम्रो हुनेछ कि तपाइँ कामको साथ तपाइँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहुन्छ। अवस्था तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा सामान्य हुनेछ। तपाईको परिवारका सदस्यहरुसंग तपाईको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। दिनहरू पैसाको हिसाबले महँगो हुने आशा गरिन्छ। तपाईं आफ्ना बच्चाहरूको शिक्षामा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो भने निश्चित रूपमा घरका एल्डरहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्।
भाग्यशाली रंग: रातो
भाग्यशाली संख्या: २१
भाग्यशाली समय: बिहान :30: to० देखि अपराह्न :00:००
मकर: २२ डिसेम्बर - १ January जनवरी
जब स्वास्थ्यको कुरा आउँदछ, चिनी र उच्च रक्तचापका बिरामीहरूलाई आज होशियार रहन सल्लाह दिइन्छ। तपाईंले आफ्नो औषधीहरू समयमै लिनु पर्दछ साथै अत्यधिक तनावबाट बच्नु पर्छ। अफिसमा हाकिमको मुड सही हुँदैन। तपाईंले तिनीहरूको हप्काइ सुन्नु पर्छ। यो उत्तम छ कि तपाईंले सावधानीपूर्वक आफ्नो सानो काम पूरा गर्न कोशिस गर्नुभयो। स्टेशनरी काम गर्ने मानिसहरूले आर्थिक लाभ लिन सक्दछन्। एकै साथ, फलाम उद्योगसँग सम्बन्धित मानिसहरूले नोक्सान भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। आफ्नो जीवनसाथी संग सम्बन्ध बलियो हुनेछ। तपाइँ प्रतिकूल परिस्थितिमा तपाइँको प्रेमीको पूर्ण समर्थन प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज आर्थिक मोर्चामा मिश्रित परिणामहरू हुनेछन्।
भाग्यशाली रंग: बैजनी
भाग्यशाली संख्या: २
भाग्यशाली समय: १०:०० बिहान १::30०
कुम्भ: २० जनवरी - १ February फेब्रुअरी
आज तपाई अचानक पुरानो साथीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो साथी संग एक महान समय हुनेछ। मानसिक रूपमा, तपाईं आज धेरै शक्तिशाली र सक्रिय हुनेछ। अफिसमा तपाई आफ्नो सबै कामहरू समयमै पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। साथै, तपाईंको वरिष्ठ / मालिकहरू तपाईंको कामबाट पनि सन्तुष्ट हुनेछन्। यदि तपाईं सरकारी कामको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, आज तपाईंले केही राम्रो समाचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिन साझेदारीका रूपमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको लागि धेरै लाभदायक दिन हुनेछ। तपाईंले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन राम्रो मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सर्तहरू तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा अनुकूल हुनेछ। तपाईंले बुबाको आशिष् पाउनुहुनेछ। उहाँ तपाइँको उपलब्धिहरु मा धेरै गर्व हुनेछ। आज तपाईं आफ्नो पति या पत्नीसँग रोमान्टिक डिनर मितिमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईं राम्रो स्वास्थ्य मा हुनेछ।
भाग्यशाली रंग: निलो
भाग्यशाली संख्या: १२
भाग्यशाली समय: :00:०० बिहान १२::55
मीन: १ February फेब्रुअरी - २० मार्च
यदि तपाईं आफ्नो घरको सजावटमा केही परिवर्तन गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, आजका दिन यसका लागि राम्रो दिन हो। तपाईंले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको पनि समर्थन प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको जीवनसाथी संग केहि दिन को लागी समस्या भइरहेको छ, भने आज तपाइँ तपाइँको प्रियको मूड मा केहि परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो हुन्छ तपाईको रिसलाई बिर्सिएर आफैलाई मायाले व्यवहार गर्नु। तपाईको वित्तीय स्थितिमा सुधारको प्रबल सम्भावना छ। अचानक सम्पत्ती पाउने सम्भावना छ। अफिसमा, यदि तपाईं आफ्नो टीमको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सबैसँग शान्त ढंगले व्यवहार गर्ने सल्लाह दिइन्छ। उग्रसँग कुरा गर्नबाट जोगिनुहोस्। व्यवसायिकहरूलाई आज आर्थिक लेनदेनको क्रममा सावधान रहन सल्लाह दिइन्छ। जहाँसम्म तपाईंको स्वास्थ्यको सवाल छ, आज मांसपेशीहरू सम्बन्धित गुनासो हुन सक्छ।
भाग्यशाली रंग: केसर
मेथीको दानाले तौल घटाउन फाइदा पुर्‍याउँछ
भाग्यशाली संख्या: २०
भाग्यशाली समय: :20: ०० बिहान 3:०० बजे
अस्वीकरण: यस लेखका बीचमा राखिएका विचार, विचारहरू ज्योतिषी द्वारा साझा गरिएको हुन्छ र बोल्डस्की र यसका कर्मचारीहरूका विचारहरू प्रतिबिम्बित गर्दैन।
जून २०१ Hor धनु राशिका लागि कुंडली भविष्यवाणी
लुज मोशन भइरहेको छ र थाहा छैन कसरी बाहिर जान्छु? द्रुत राहतको लागि यी १ Home घरेलु उपचारहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्
इको-फ्रेन्डली दिवाली: सजावट विचारहरू तपाईंको घरको सजावट अपशिष्ट पदार्थहरूको प्रयोग गर्न उचाल्न
सारा अली खानको तातो गुलाबी मोनोक्रोमेटिक लुक Is-मिनेट ग्लैम मेक-अप गोल हो
१० फूडहरू तपाईंले बिहान खानु हुँदैन
सावन सोमवर भ्राट २०१:: मिति, महत्व र लाभहरू
अनीता डोंगरेमा जय हो केटी डेजी शाह
मकर संक्रान्ति २०२०: अवल र घी पोंगल रेसिपी जुन तपाईं सजीलै आफ्नो घरमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
अरोमाथेरापी फेशियल र यसको छालामा हानिकारक फाइदाहरू
सारा अली खान सुन्दर प्रिन्ट गरिएको सलवार सूटमा गंगा आरती गर्छिन्
सूर्य नमस्कार फिटनेस सीक्रेट
दीपिकाको पद्मावती अवतार ओभर ड्रल गर्नुहोस्, के हामी?
डेंगू ज्वरोको उत्तम घरेलु उपचार
प्राकृतिक रूपमा घनिष्ट क्षेत्रहरू कसरी सेतो पार्ने
एक हप्तामा पेटको बोसो गुमाउनुहोस्
कसरी तुरुन्तै अनुहार र घाँटीबाट ट्यान हटाउने
प्रेम र विवाह कुंडली जन्म मिति